လစ်ဗျားမှ နိုင်ဂျာသို့ ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံသူ ၁၇၂ ဦးအား UNHCR မှ ရွှေ့ပြောင်းပေး - Xinhua News Agency
Africa & Middle East International Organizations မြန်မာ-中文
ထရီပိုလီ၊ နိုဝင်ဘာ ၆ ရက် (ဆင်ဟွာ)
လစ်ဗျားနိုင်ငံမှ နိုင်ဂျာနိုင်ငံသို့ ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံသူ ၁၇၂ ဦးအား ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံး (UNHCR) က ရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ကြောင်း နိုဝင်ဘာ ၅ ရက်က ပြောကြားခဲ့သည်။“ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာအေဂျင်စီဖြစ်သော UNHCR သည် လစ်ဗျားနိုင်ငံမှ ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံသူ ၁၇၂ ဦးအား နိုင်ဂျာနိုင်ငံတွင် နိုဝင်ဘာ ၄ ရက် ညနေပိုင်းက ဘေးကင်းစွာ ရွှေ့ပြောင်းပေးနိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ လစ်ဗျားအာဏာပိုင်များသည် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ လေကြောင်းပျံသန်းမှု ပိတ်ပင်မှုကို ရုပ်သိမ်းပြီးနောက် တစ်နှစ်ကျော်အတွင်း နိုင်ဂျာသို့ ပထမဆုံး ကယ်ဆယ်ရေးလေယာဉ်ဖြစ်ကြောင်း’’ UNHCR ၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
ရွှေ့ပြောင်းလာသူ အများအပြားသည် ယခင်က အခြေအနေဆိုးများဖြင့် ထိန်းသိမ်းခံထားရပြီး လူကုန်ကူးမှု၏ သားကောင်များ သို့မဟုတ် လစ်ဗျားတွင် အကြမ်းဖက်မှုများ ကြုံတွေ့ခဲ့ရကြောင်း ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
“အဆိုပါ အသက်ကယ် ကယ်ဆယ်ရေးလေယာဉ်များ ပြန်လည်ပြေးဆွဲနိုင်သည်ကို မြင်တွေ့ရတဲ့တွက် UNHCR အနေနဲ့ စိတ်သက်သာရာရမိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နေရာအရေအတွက် ကန့်သတ်ထားတဲ့အတွက် ရွှေ့ပြောင်းပေးခြင်းကသာ လုံခြုံရေးနဲ့ ကာကွယ်ရေး အရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့ အလွန်ထိခိုက်လွယ်သူများအတွက် ဖြေရှင်းချက် ဖြစ်ပါတယ်’’ ဟု လစ်ဗျားနိုင်ငံရှိ UNHCR ၏ အကြီးအကဲ Jean-Paul Cavalieri ကပြောသည်။
၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ထားသော အရေးပေါ်အကူးအပြောင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းမှ တစ်ဆင့် လစ်ဗျားတွင် အသက်အန္တရာယ်ကြုံတွေ့နေရသည့် ဒုက္ခသည်များကို ၎င်း၏နယ်မြေတွင် ယာယီလက်ခံရန် သဘောတူထားသည့် နိုင်ဂျာအစိုးရ၏အကူအညီဖြင့် ရွှေ့ပြောင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယခုအချိန်အထိ ဒုက္ခသည်များနှင့် ခိုလှုံခွင့်တောင်းသူ ၃,၃၆၁ ဦးကို လစ်ဗျားမှ နိုင်ဂျာသို့ ရွှေ့ပြောင်းပေးနိုင်ခဲ့ပြီး ၎င်းတို့အနက် ၃,၂၁၃ ဦးသည် နိုင်ဂျာမှ တတိယနိုင်ငံသို့ ထွက်ခွာသွားခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
လစ်ဗျားနိုင်ငံ၌ ၂၀၁၁ ခုနှစ်ကတည်းက ဖြစ်ပွားခဲ့သော မငြိမ်မသက်မှုများကြောင့် အာဖရိကတိုက်သားများ အများစုဖြစ်သည့် တရားမဝင် ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများသည် မြေထဲပင်လယ်မှ ဥရောပကမ်းခြေများသို့ ဖြတ်ကျော်ရန် ရွေးချယ်ခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
TRIPOLI, Nov.5(Xinhua) — The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) on Friday said it evacuated 172 vulnerable asylum-seekers from Libya to Niger.
“UNHCR, the UN Refugee Agency, evacuated 172 vulnerable asylum-seekers out of Libya to safety in Niger on the evening of4November. It was the first evacuation flight to Niger in more thanayear, after the Libyan authorities liftedablanket ban on humanitarian flights,” UNHCR said inastatement.
Many of those evacuated had previously been detained in dire conditions, and were victims of trafficking or had experienced violence in Libya, the statement said.
“UNHCR is relieved to see the resumption of these life-saving evacuation flights. However, considering the limited number of places, evacuation can only beasolution for extremely vulnerable people, in urgent need of security and protection,” said Jean-Paul Cavalieri, UNHCR chief of mission in Libya.
The evacuation took place through the Emergency Transit Mechanism established in 2017 with the help of the Government of Niger, which agreed to temporarily receive on its territory refugees facing life-threatening situations in Libya, according to the statement.
So far, 3,361 refugees and asylum-seekers have been evacuated from Libya to Niger, of whom 3,213 have departed from Niger to third countries for resettlement.
Many illegal migrants, mostly Africans, choose to cross the Mediterranean Sea to European shores from Libya, due to the state of chaos that plagued the country since 2011. Enditem
လစ်ဗျားနိုင်ငံ အနောက်ပိုင်း အခြေစိုက် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များက ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေများကို ရှုတ်ချ
လစ်ဗျားနိုင်ငံ၌ လာမည့် ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ပံ့ပိုးကူညီရန် ဥရောပသမဂ္ဂ အလေးထား
နိုင်ဂျာနိုင်ငံတွင် တရုတ်နိုင်ငံမှ လှူဒါန်းသော COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်းအစီအစဉ်စတင်